Jumlo Sare-Farsamo hawo nadiifiye laambad 833 Soo saaraha iyo alaab-qeybiyaha | ARCAIR
Farsamada sare ee nadiifiyaha hawada laambad 833
Naqshadaynta daboolka laambada ee gaarka ah iyo moodada ayaa soo jiidata indhahaaga marka ugu horeysa.
Matoor rogaal celiye DC ah oo leh heerar badan oo soosaarid ah oo loo maro 3 xawliyada Xakamaynta taabashada;
Dib-u-wareejin buuxda ayaa si wax ku ool ah u iftiimisa urta karinta, u keenida hawo cusub qolkaaga;
sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa sifeeyaha hawada.
Gudaha UV LAMP inta badan nadiifi oo ku keena hawo nadiif ah.
Hababka hawo-qaadista kaliya ee leh dib-u-wareejin u baahan in lagu rakibo filtarrada kaarboon ama filtarka balasmaha (kuma jiraan)
Naqshadaynta daboolka laambada ee gaarka ah iyo moodada ayaa soo jiidata indhahaaga marka ugu horeysa. Daboolka laambadda oo ku qalabaysan koronto weyn oo DC ah iyo marawaxad centrifugal ah ayaa bixisa awood nuugid xoog leh, sanqadh yar, filtar dufan aan dheg lahayn, oo ka saarta xaddi badan oo qiiq ah iyo urta karinta ee jikada.
Xakamaynta taabashada waa jawi qurxoon, raaxo leh, waxay keentaa dareenka quruxda.
Soo saarid fudud oo 3 xawli ah oo loogu talagalay noocyada karinta ee kala duwan, ka dhig jikadaada mid cusub oo badbaado leh si aad ugu raaxaysato wakhtiga karinta ee qoyskaaga. Hawsha gaarka ah ee ikhtiyaarka badan ee daboolkan: Kontroolka fog ha u xakameeyo karintaada si sahlan xitaa in yar oo fog. WiFi waxay ka dhigaysaa noloshaada cunto karinta mid ka badan samrt oo aad ku furi karto daboolka iyo iftiinka taleefankaaga ka hor intaadan guriga iman. Markaa hawadu waxay noqon kartaa mid cusub markaad timaaddo oo iftiinka diiran ee jikada ayaa kugu soo dhawaynaya gurigaaga.
Filterka Plasma ee farsamada sare kaas oo aan lahayn oo kaliya shaqada shaandhada dhuxusha laakiin ka saari karta xeryahooda kaarboonka ee noolaha yar yar sida unugyada urta. Waxaad si badbaado leh uga hortagtaa jeermiska, fayrasyada, kudka iyo faafitaankooda.
Unugyada, sida jeermiska iyo urta, waxay u jajaban yihiin heerka molecular. Electrode-ka balaasmaha waxa uu dhaliyaa oksijiin, sida ozone, kaas oo looga baahan yahay in lagu daweeyo molecules-ka.Waxa aad helaysaa hawo nadiif ah – ogsijiin, qoyaan, iyo CO2.
Waa deegaan saaxiibtinimo, wax ku ool ah iyo caawinta badbaadinta korontada: aerodynamics gudaha ayaa la hagaajiyay si ay u aamusaan.
Daboolka laambadku wuxuu ku dul laadlaadsan yahay saqafka iyadoo loo eegayo fiilada birta ah ee abrasion u adkaysata (dhererka la hagaajin karo iyadoo loo eegayo dhererka saqafka); Koofidan laambadda waxa kaliya oo loo adeegsadaa qaabka dib u wareegga kaas oo ay tahay inuu ku jiro kaarboon ama filtarrada balaasmaha.
8W digsi LED leh oo leh laba xawaarihiisa dimmer, waxay hagaajin kartaa iftiinka kala duwan sida aad u baahan tahay, waxay si wax ku ool ah kuugu iftiiminaysaa goobta shaqada inta lagu jiro karinta oo waxay noqon kartaa iftiin mugdi ah oo leh naqshad qurux badan.
Daboolka laambaddu waxay isticmaashaa walxo tayo sare leh waxaana lagu sameeyay nakhshad la hagaajiyay, waxaana loo isticmaali karaa sidii nalka saqafka.
Hore: Dhamaadka sare ee T-qaabka buuxa ee LED Panel Island hood 810
Hood kariyaha naxaasta
Filter Hood Aluminium
Filter Hood Baffle
Filter Hood Kaarboon-kariye
Shaandhaynta Dufanka Hood
Hood kariyaha kareemka
Hood-kariye aan lahayn tuubo
Hood karinta dhalada
Hood Cooker Hood
Hood Makiinada Iftiiminta Led
Casriga Range Hood
Ku xidh Hood Cooker
Hood Cooker Silver
Hood kariyaha cad
Nooca xakamaynta: Xakamaynta taabashada/maamulka WiFi
Iftiin: 1xLED looxa giraanta
Nooca Shaandhaynta: 1pcs filter
Soodejinaya QTY(20/40/40HQ): 192/400/400
Midabka: Madow / Cadaan / Buluugga / Cagaaran / Dahab / Purple
Matoorka: DC 650m3/h
Shaqada shaandhaynta: filter HEPA
Hood Cooker Island ee Naqshadeeyay 820
Hood kariyaha Jasiiradda Gaarka ah ee loo qaabeeyey 826